Imishini Yokujula Okujulile, Amathuluzi Okumba Okujulile - UDeshen
Umshini we-CNC Gun Drilling Machine
Shandong Deshen Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd.
Umshini Single / kabili / amane umshini wokuphotha isibhamu
Hole imishini ububanzi: 1mm-40mm
Hole imishini ukujula: kuze kufike ku-4000mm
Uhlelo lokulayisha nokulayisha ngokuzenzekelayo luyatholakala
Isicelo:Ithuluzi lezokwelapha, Imoto, i-aerospace, isikhunta nokufa, imishini ye-hydraulic, ezempi, njll
Ukulawulwa kwe-CNC: X, Y, Z-eksisi kukhona CNC elawulwa
Ukubhola okuqinile:I-3mm-100mm (i-BTA kanye ne-gun drilling system ehlanganisiwe)
Hole imishini ukujula:kuze kufike ku-3000mm
Umshini uhlelo ukusebenza: Ukumba isibhamu kanye ne-BTA itafula lokusebenza elinenkomba yokusebenza kungakhethwa
Isicelo: Inomsebenzi wokumba umgodi oqondile, umgodi othambekele, umgodi oyimpumputhe nomgodi wesinyathelo.
Isetshenziswa kabanzi ezimotweni, embonini yezithuthuthu, embonini yezikhunta, embonini yezempi, embonini ye-aerospace, umzimba we-valve wokubacindezela, ishaft yegiya nezinye izingxenye zokucubungula okuncane komgodi.
Imishini Solid: 20mm-150mm
I-Counter boring / burnishing: 20mm-800mm
Lo mshini umshini okhethekile wokuchofoza izingxenye zomgodi ezijulile ze-cylindrical, ezilungele ukumba nokubhora izingxenye zomgodi ezijulile ze-cylindrical. Ngesikhathi sokubhola, imodi ye-BTA iyamukelwa, okungukuthi, i-feeder ehambisa uwoyela, futhi ukusika kukhishwa ngaphakathi kwepayipi lokuprakthiza kuya ebhakedeni lokususa i-chip ngemuva kombhede ngendawo yokusika. Lapho kuyisidina, uwoyela uphiwa ekugcineni kwebha eyisicefe, bese i-chip idedelwa ebhakedeni lokususa i-chip ekhanda lomshini ngendawo yokusika.
izikhombo zezibhamu zokuzivivinya: 11.5mm-50mm
izibhamu ezibunjiwe:3mm - 45mm
okuqinile isibhamu se-carbide:1mm kuya ku-12mm
Shandong Deshen Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd.yasungulwa ngo-2017, ezinze Dezhou, Shandong, China. Yinkampani kadadewabo weDezhou Drillstar Cutting Tool Co., Ltd. (www.drillstarcuttingtool.com). IDeshen yinkampani yobungcweti ebandakanyeka ekuthengiseni, ukukhiqiza kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe bemishini yokujula emgodini ojulile, amathuluzi wokumba umgodi ojulile nezinsiza, kanye nensizakalo yokucubungula ephezulu.
Ekomkhulu layo eDezhou City, eSifundazweni SaseShandong, indawo yesevisi ihlanganisa iChina neNingizimu-mpumalanga ye-Asia, Middle East, i-Ningizimu Melika, i-Europe nezinye izifunda. Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu emkhathini, amandla enuzi, amandla omoya, ukukhiqizwa kwemishini, ukukhiqizwa kwezimoto, imishini yezokwelapha, ukwakhiwa kwemikhumbi yezitimela, umkhakha wesikhunta, umkhakha wamalahle nowoyela, ezempi nokunye. Le nkampani ithatha ukufunwa kwamakhasimende njengenhloso kanye "nensizakalo ethembekile, ukuqamba kwesayensi nezobuchwepheshe" njengomgomo webhizinisi; ubuchwepheshe bekilasi lokuqala, ikhwalithi yomkhiqizo osezingeni lokuqala kanye nensizakalo esezingeni lokuqala ukuzibophezela okuphakade nokuphishekela kukaDeshen.
round ibha imishini umshini
umshini wokugaya izibhamu
ngaphandle kokubopha okukodwa ...
Ithunyelwe isibhamu kancane no ...
Umtshingo owodwa opholile ...
Isitolo esidayisa yonke impahla CNC Deep ho ...
Amathuluzi we-Step and Pilot angafakwa ku ...
Shandong Deshen Imishini Ukukhiqiza Co., Lt ...
I-PCBN (i-cubic boron nitride)
I-PCD (i-polycrystalline diamond) I-Polycrystalline cubic boron nitride - Isifinyezo sesiNgisi i-PCBN (i-cubic boron nitride) Amathuluzi we-CBN ngokuvamile acubungula izingxenye ze-Cast Iron nezensimbi !!! N ...
Izinzuzo: Isetshenziselwa ukuqeda imishini yokucabanga okujulile, ukuxazulula inkinga yemishini yamakhasimende; Iyakwazi ukulungisa iqonde ngqo, ithuthukise ukunemba kokwenziwa komsebenzi; Idizayini ilula futhi kulula ukuyisebenzisa; Impilo yamathuluzi amade, ingaba kabusha ...